प्रेमिका भेट्न पुगेको आत्मा | काव्यालय
प्रेमिका भेट्न पुगेको आत्मा | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
प्रेमिका भेट्न पुगेको आत्मा
by शिल्पी विनोद July 18, 2020
“बरी ! ए बरी !
बरी ! ए बरी ! बरी !
वेक अप बरी, इट्स फुल मून ! सी, इट्स द ब्यूटिफुल मिड नाइट एण्ड आई एम् विथ टु ग्लास अफ् डार्क कफी, डियर ।
बरी ! गेट अप !
गेट अप बरी !”
हावाको सरसराहटले वर्षाैंदेखि डेड सिटीको गुलमोहरको जंगलभित्रको ग्रेभयार्डमा हावाको तरेलीसँगै बहँदै चिहान नं. ११ को त्यो प्लास्टर्ड ग्राउण्डमाथि एउटा पिपलको पात थपक्क बस्न पुग्यो । त्यो रात फुल मून अर्थात् पूर्णिमाको रात थियो । र बरी जमिनमुनि मस्त निद्रामा थिइन् ।
गहिरो निद्रामा मग्न भएकी बरीलाई उठाउन बारम्बार आवाज दिइरहेको थियो कोही । उसले आफ्नो हातमा २ कप तातो डार्क कफी लिएको थियो । एउटा झोला पनि भिरेको थियो उसले । उसको कपाल बेलाबेलामा चल्ने हावाको झोंकाले हल्लिरहन्थ्यो । हल्का गहुँगोरो वर्णको उसको हल्का जुँगा र दाह्री थियो र आँखामा गोलो पातलो लेन्सको चस्मा ।
मस्त निद्रामा सायद सपनामा कतै पुगेकी पो थिई कि ? बारम्बारको नाम-पुकारले सायद बरी झस्किई कि ? धेरै पटकको बोलावटले निद्राबाट टुटेकी बरी जागी । र ती चिसा हातका औंलाहरुले आँखा मिची । आँखामा चिसा औंलाहरु पुग्दा आनन्द लाग्यो होला बरीलाई । र बिस्तारै ती पेयर्ड आँखाहरुले ठम्याउने कोसिस गर्न थाली उसले । सुरुमा त धमिलो देखेकी उसले पूर्ण चन्द्रमाको त्यो मधुर उज्यालोमा उसको नामले बोलाउने त्यो पुरुषलाई चिन्न हम्मे–हम्मे पर्यो र मस्तिष्क माथिको धेरैबेरको प्रेसरपछाडि अन्तमा उसले चिनी र आफ्नो दाहिने हात ऊतर्फ आफूलाई उठाउने इसारामा अघि सारी ।
उसले पनि यी सबै बरीका भावभंगी उभिएरै मज्जाले हेरिरहेको थियो । जब बरीले आफूलाई उठाउने इच्छा स्वरुप राईट ह्याण्ड अघि सारेकी थिई, उसले आफ्नो दुवै हातका इन्डेक्स फिङ्गर र थम्बले अँठ्याइएका ती दुवै कपलाई सावधानीपूर्वक भुइँमा राख्यो । यसो गर्दा उसको दाहिनेभन्दा देब्रे घुँडा अलिक बढी खुम्चेको थियो ।
बरीको त्यो चिसो हातको ती फ्रोजिल औंलाहरुलाई उसले आफ्नो देब्रे हातको पाममा प्रेमिल भावमा लियो । बिस्तारै ती समाहित भएका हातहरुको मन्द सहायतामा बरी चिहानबाट उठी । र उनीहरु दुवै एक अर्काको आम्ने साम्ने भएर उभिए ।
ठिक यहि बेला आकाशले झिलिक्क बत्ती छोड्यो । त्यसको केही सेकेण्डमै भयङ्कर ठूलो आवाजमा आकाश कड्कियो । बरी तत्कालै डराई र उसलाई गर्लम्म अंगालो मारी । बिस्तारै हावा चल्यो । बरीको अंगालोमा विलीन भएको उसले उनीहरुका लागि ल्याइएका २ कप डार्क कफीलाई सम्झ्यो । र बरीलाई त्यस बारेमा कानैमा भन्यो । लजालु मुस्कान छर्दै बरीले उसलाई बिस्तारै अंगालोबाट मुक्त गरी ।
त्यो २ कप कफी उठाउन उसले थोरै शरीर झुकायो । र दुवै हातमा एक एक गर्दै थम्ब र इन्डेक्स फिङ्गरले चप्प छोप्यो । आफ्नो दाहिने हातको त्यो कप बरीतर्फ बढायो । बरीले त्यो कप त्यसै गरी इन्डेक्स फिङ्गर र थम्बले अँठ्याई । हावाको चाल बढ्ने सुरसारमा थियो । आकाशबाट पानीका छिटाहरु बरी र उसको टाउकोमा परे । सायद केही ड्रप्सहरु उनीहरुका कफीमा पनि मिसिए होलान् । उसले बरीलाई नजिकैको समीको रुखको फेद तर्फ जाने इशारा गर्यो र उनीहरु त्यतैतर्फ अघि बढे । आकाशबाट वर्षा हुने क्रम अलिक बढ्न थाल्यो । उनीहरु त्यो समीको रुखको फेदका जराहरुमा आम्ने साम्ने गरेर बसे ।
“कस्तो आनन्ददायी, गज्जब मौसम है ?” बरीले मख्ख पर्दै भनी, “आकाशमा फुल मून, धर्तीमा सिमसिम वर्षा, तिमी र म अनि हाम्रो हातमा एक-एक कप डार्क कफी !” उसले बरीको त्यो मिठो भनाईमा बिस्तारै टाउको हल्लाएर सहमति जनायो । फेरि बरी बोली, “अनि, पछाडि झोलामा के ल्या’का छौ नि ?”
यस प्रश्नको उत्तर उसले तत्काल दिएन । उसका आँखाहरु त्यो मधुरो प्रकाशमा बरीका आँखामा विलीन भएका थिए । या त फेरि बरीको प्रश्नमाथि उसको ध्यानै पुगेन ।
बरीले देब्रे हातले उसको देब्रे घुँडामा घचेड्दै धक्काई । ऊ झस्क्यो । र फेरि झोलामा के ल्याएको भन्ने प्रश्न सोझ्याई बरीले । उसले झोलाको मसिना दुई धाँगाहरुलाई देब्रे हातको सहयोगमा दाहिने काँधबाट थोरै छुटायो । र दाहिने हातको कप देब्रे हातमा सार्दै दाहिने कुम थोरै नुगाउँदै धागो निकाल्यो र त्यसै गर्दै देब्रे काँधबाट पनि । उसले बरीलाई कफी पिउने इशारा गर्दै आफूले त्यो मनतातो कफी एक सुरुप लियो । र आफ्नो कप बरीको देब्रे हातमा थमायो । त्यसपछि दुवै हातले झोला खोलेर भित्रबाट चेस बोर्ड, चेसका गोटीहरुको एउटा डब्बा र एउटा डायरी निकाल्यो र झोलामाथि थपक्क राख्यो ।
यतिञ्जेल सम्म बरीले २–३ सुरुप कफी लिइसकेकी थिई तर आँखा भने उसका गतिविधि तर्फ सोझिएका थिए । उसले झोलामा के छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउँदै थिई । बरीले उसको कफी ऊतर्फ सोझ्याई र उसले त्यो कप राइट ह्याण्डका थम्ब र इन्डेक्स फिङ्गरले चप्प छोप्यो ।
soul and soulmate
त्यो एकाविहानै मैले सकम्बरीले पठाएको पत्र पाएँ । त्यस पत्रमा सकम्बरीले आफ्नै मृत्युको रहस्य सहितको कथा लेखेकी रहिछ । आफ्नै मृत्युको रहस्य बोकेको त्यो कथा सहितको उनको पत्र पाउने बित्तिकै मैले एकै श्वासमा सबै पढेँ । म त छाँगाबाट खसेँ । मेरा शरीरका रौँहरु खडा भए । मन अमिलो भयो । आँखाबाट अनायासै अविरल आँसुहरु बग्न थाले । मेरो उनीसँग भेट्ने सपना विपनामा परिणत हुन नपाउने भयो अब । अंकुराउने भएन हाम्रो मिलन पछिका माया र सद्भाव । र म मरेतुल्य भएँ । पत्रका अनुसार बरीले पूर्णिमाको रातमा पृथ्वी छोडेकी थिई । र त्यहि बितेको पूर्णिमाको रात पछिको अर्काे दिनको बिहानमा मैले उसको आफ्नै मृत्युको रहस्य खोलिएको पत्र पाएको थिएँ ।
पत्र पढिसक्दा मलाई पनि पृथ्वी छाडी ऊसँगको मिलनमा यहाँबाट विलीन हुन मन लाग्यो । हराउन मन लाग्यो म बाँचिरहेको यो संसारबाट । उनको मृत्युको रहस्य सहितको त्यो पत्रलाई मैले मेरो सिरानीमुनि सुरक्षित राखेँ । र आफ्नो कर्ममा लागेँ । दिनभरको काममा तनले निरन्तर कर्म गरेपनि मन लागेन । मनले बरीलाई हरपल खोजिरह्यो । कत्ति सपना साँचेको थिएँ मैले, बरीसँग भेटेर गर्न भनी । सबै सपना हुरीले एकै झोक्कामा उडाई लग्यो ।
एकमन त साह्रै रिसाएँ पनि त्यो पूर्णिमाको रातसँग । त्यहि पूर्ण जुनेली रातसँग । त्यो बितेको शीतल रातसँग । त्यहि शीतल रातले मेरी बरीलाई मबाट टाढा लगेको थियो । अर्कै संसारमा । तर मैले मनमनै वाचा गरेँ । बरी, म तिमीलाई भेट्न अवश्य आउनेछु, त्यहीँ, तिम्रो संसारमा । र त्यो रात पूर्णिमाको अब आउने रात हुनेछ । हामी सँगै हुनेछौँ र मैले मसँगै ल्याउनेछु, २ कप डार्क कफी र सँगै बसैर पिउने छौँ हामी, अहिलेको तिम्रो संसारमा ।
यहि वाचा मैले डायरीको एउटा पानामा लेखेँ र त्यो पानालाई ममतापूर्वक पट्याई बरीले पठाएको पत्रसँगै सिरानीमुनि राखेँ, जतनसाथ । यसरी त्यो दिनको व्यस्तसँग बितेको समय र कामले थकित म चाँडै निदाएछु । अर्काे बिहान सबेरै उठी उहि कर्ममा लिन भएँ फेरि । यसरी मेरा दिनहरु बित्दै थिए ।
एकरात मस्त निद्रामा डुबेको म मध्यरातमा एक्कासी जागेँ । भित्तामा झुण्डाइराखेको घडि हेरेँ । रातको १२ः१० बजेको रहेछ । मलाई कफीको तलतल लाग्यो र विस्तारै बिरालोको पदचापमा किचेन छिरेँ । कफी बनाएँ । र सदा बसेर बिताउने त्यहि झ्याल नजिकैको कुर्सीमा बसेँ । केही सुरुप कफी लिएँ । र कुर्सी अगाडिको टेबलमा राखेँ । आँखाहरु झ्यालबाहिर कुद्दै थिएँ । जुनेली रातको त्यो उजेलीमा अगाडिका डाँडा उज्याला देखिन्थे । टाउको थोरै झुकाएँ । आँखा तन्काएँ । र छड्के पर्दै आकाशतर्फ नियालेँ । आकाशमा पूर्ण चन्द्रमा देखेँ । बादलले ढाक्न लागेको पूर्ण चन्द्रमा । एक्कासी झस्किएँ म । शरीरमा करेन्ट लागे जस्तो महसुस भयो । शरीर फतक्क गले जस्तो भयो । आँखा एकतमासले पिपलको बोटमा अडिइरह्यो । टेबल माथिका हातहरु चल्न मानेनन् । श्वास रोकिए जस्तै भयो । र एक्कासि शरीर कुर्सीबाट भुइँमा गर्ल्याम्म ढल्यो ।
समीको फेदका ती ठूलठूला जराहरुमा बसेका तिनीहरु एक अर्कालाई हेरिरहे । कपको डार्क कफी पिइरहे । यतिञ्जेलसम्म त्यो पातलो वर्षा रोकिइसकेको थियो । उनीहरुका आँखा एक-अर्कातर्फ सोझिइरहेका थिए । दुवैका ओठहरु मौन थिए । तर सायद दुवैका मनहरु मौन थिएनन् । अचानक बरीका आँखा चेसतर्फ तानिए । र ओठको मौनतालाई भंग गर्दै बरीले उसलाई बोलाई, “शिल्पी ?” शिल्पी झसङ्ग भयो र बोल्यो, “अँ, भन बरी ।” चेसतिर र इशारा गर्दै बरीले भनी, “ल, चेस खेलुम् अब । जसको गोटी काटिन्छ, उसले कविता भन्छ । हुन्छ ?” शिल्पीले नकार्ने त कुरै आउँदैन थियो । उसले शर्त पारित गर्यो । पिउँदै गरेको कफीको आधाभरि कप छेउमै बिसाएर उनीहरु त्यस पूर्णिमाको मन्द उजेली रातमा समीको रुखमुनि बसेर चेस खेल्न थाले । जसको गोटी काटियो, उसले कविता भन्ने शर्त सहित । र उनीहरुको खेल अगाडि बढ्यो । कविताहरु दुवै पक्षबाट वाचन भइरहे । एक्कासि बरीले शिल्पीको डायरी मागी । आज शिल्पीले सकम्बरीका केही कुरा नकार्न सक्ने हुर्मत छैन । किनकि बरीलाई भेट्ने चाहना उसको वर्षाैं देखिको हो र आज त खुस पनि छ, बरीसँग भेटेर कफी जो पिइसकेको छ ।
शिल्पीले डायरी बरीको हातमा थमायो । बरीले एकएक गर्दै पाना पल्टाउँदै गई । उसले पानाका अक्षरहरु पढिन । बस्, पल्टाउँदै गई एक-एक । करिब बिचतिर पुग्दै गर्दा एउटा छुट्टिएको सेतो पाना उसले भेटी । खै, के मनले हो, त्यसलाई उसले डायरीको पानाबाट अलग्याई । अगाडि सफेद देखेपछि बरीले पन्रनालाई पल्टाएर हेरी । ऊ तीनछक परी । त्यो त उसैको पेन्सिल स्केच पो रहेछ ।
धेरै पहिले शिल्पीले सकम्बरीलाई सम्झेर बनाएको स्केच थियो त्यो । बरीले त्यो स्केच शिल्पीसँग मागी । शिल्पीले मौन रही टाउको बिस्तारै हल्लाई सहमति जनायो । अब उनीहरु पुनः चेस तर्फ फर्किए । बरीले शिल्पीलाई एउटै चालमा चेक दिई । शिल्पीको राजा चल्ने कुनै ठाउँ रहेन अब । शिल्पी झस्कियो ।
बिहानको छ बजिसकेको रहेछ । छोरा मस्तसँग भुइँमा लडिरहेको । आमाले चिच्याई चिच्याई टाउको हल्लाउँदै बोलाएकी रहिछन् मलाई । म ब्युझँदा आमा मलाई सोध्दै हुनुहुँदो रहेछ, “बाबु किन यसरी भुइँमा सुतेको तँ ?” आँखा मिच्दै मैले आफूलाई बिस्तारै होसमा ल्याएँ । चारैतिर नजर डुलाएँ । साच्चै नै, म त भुइँमै पो सुतिरहेको रहेछु । छेउमा मेरो कविताको डायरी र चेसका गोटीहरु पनि छरपस्ट भएका रहेछन् । मैले टाउको मुसारे, टाउकोको पछाडि थोरै दुखेजस्तो भयो । सानो चोट लागेको रहेछ तर आमालाई केहीपनि भनिनँ । बिस्तारै उठेँ । ज्यान कता कता दुखिरहेको थियो । र पाइलाहरु अगाडि सार्दै नित्यकर्ममा लागेँ । मौन ! मौन ! चुपचाप !
surreal chess art from ebay